Macluumaad ku saabsan cudurka Coronavirus oo ku bixi doonaa 25 luqadood ayaa la soo dhigayaa bog cusub oo internetka ah (website). - Corona Denmark
Macluumaad ku saabsan cudurka Coronavirus oo ku bixi doonaa 25 luqadood ayaa la soo dhigayaa bog cusub oo internetka ah (website).
Comments Off on Macluumaad ku saabsan cudurka Coronavirus oo ku bixi doonaa 25 luqadood ayaa la soo dhigayaa bog cusub oo internetka ah (website).
Boggan cusub iyo khadka teleefanka ahba waxaad ka heli kartaa jawaabaha su’aalaha la xiriira cudurka Coronavirus oo luqaddaada ah. khadka telefoonka hotline-ka ah iyo qoraalka (chatting) waxaa ka jawaabaya shaqaalaheena oo ku hadla 25 luqadood. Waxaad la hadli kartaa ama u soo qori kartaa qof ku hadla luqadaada maalin walba Inta u dhexaysa 2:00 duhurnimo iyo 4:00 galabnimo. Shaqaalaheenu waxay hayaan xogihii ugu dambeeyey ee laanta caafimaadka (Sunhedsstyrelsen) ee la xiriirta cudurka Corona ee Denmark sidaas darteedna waxay ka jawaabi karaan inta badan su’aalaha dadku soo waydiiyaan.
Wixii ka baxsan inta u dhexaysa 2:00 duhurnimo ilaa 4:00 galabnimo waxaad fariintaada noogu reebi kartaa qaab qoraal ah (chat), waxaana kuu soo jawaabi doona mid ka mid ah shaqaalaheena inta dhexaysa 2:00 duhurnimo ilaa 4:00 galabnimo. Bogga internetka waxaa lagu soo daabici doonaa warar xul ah iyo fariimaha ugu muhiimsan ee ay soo jeediyaan mas’uuliyiinta dowladdu.
Howl gelinta Boggan cusub ee internetka waxaa iska kaashaday hay’adda Dansk Flygtningehjælp og xarunta Als Research. Ololahan waxaa maal geliyey sanduukha Novo Nordisk. Waxaanu wada shaqayn la leenahay laamaha ugu muhiimsan ee dowladda daanishka si loo hubiyo in xogta la soo gudbinayo noqoto mid sax ah uguna dambaysay.